yuzana (58) in myanmar • 25 days ago
ဒီတခါ​ရေးမှာက​တော့ ဘိန်းမဲကို လူ​တွေဘယ်​လိုအသုံးချသလဲ ဘယ်​လိုရှူကြသလဲဆိုတာ သူငယ်​ချင်း​တွေဗဟုသုတရ​စေရန်​​ရေးပြသွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဘိန်းမဲကို အပင်​က​နေဘယ်​လိုယူသလဲ​တော့ကျွန်​​တော်​မသိဘူးဗျာ့။ ​မှော်​ထဲကို​ရောက်​လာတဲ့ဘိန်းက​တော့ မန်​ကြည်းသီးအနှစ်​နဲ့အ​တော်​​လေးတူပါတယ်​။
အနံ့ က​တော့စိမ်း​စွေ့​စွေ့အနံ့ ပါ။ သူ့ကိုလျှာနဲ့တို့ကြည့်​တာ​တော့ အ​တော်​ခါးပါတယ်​. ဒါ​ကြောင့်​ ကျွန်​​တော်​တို့ဝမ်းကိုက်​တဲ့အခါ ​သွေးဝမ်းပါတဲ့အခါ​တော့​ဆေးဝါးအဖြစ်​သုံးရင်​အ​တော်​​လေးထိ​ရောက်​ပါတယ်​။ ချက်​ခြင်းယူပြစ်​သလို့​ပြောက်​သွားပါတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​မူးယစ်​​ဆေးဝါးလို့​ခေါ်တာရှိမှာပါ ။ တချို့​ဆေးရုံ​တွေမှာ အ​ရေး​ပေါ်​ဆေးဝါးအဖြစ်​ဘိန်းပါတဲ့​ဆေးဝါး​တွေ​ဆောင်​ထားကြပါတယ်​။ ဘိန်းကလည်း မီးလိုပါဘဲ မသုံးတပ်​ရင်​ရန်​သူ သုံးတပ်​လျှင်​တကယ့်​ကိုအသုံးဝင်​တဲ့ ​​ဆေးဝါးတခုပါဘဲ ။
စိတ်​မညိမ်​တဲ့သူ စိတ်​ထန်​တဲ့သူကိုဘိန်း​ကြွေးလိုက်​လျှင်​စိတ်​ညိမ်​ပြီး စိတ်​​ပျော့သွား​စေပါတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​အစိုးရဆင်​ဖမ်းတဲ့စခန်း​တွေမှာတရားဝင်​ခွင့်​ပြု​ပေးထားရပါတယ်​။
​တောထဲမှ ဖမ်းဆီးရမိ​သောဆင်​ရိုင်းများ ကိုဆင်​ယဉ်​များဖြစ်​လာ​စေရန်​ဘိန်း​ကြွေး​ပေးရပါတယ်​။ ​နေစဉ်​​နေ့တိုင်း​ကြွေး​ပေး​သောအခါ တ​ဖြေး​ဖြေးယဉ်​လာပြီး​တောထဲပြန်​မသွား​တော့ လူ​တွေရဲ့​စေခိုင်းမှူကိုလည်းနာခံလာရပါ​တော့တယ်​ ။ဒီဘိန်​​တွေက​တော့ မြန်​မာ့သစ်​ထုပ်​လုပ်​​ရေးက​နေဆင်​စခန်း​တွေကိုထုပ်​​ပေးကြပါတယ်​။ ဆင်​​တွေယဉ်​ပါး​အောင်​​ကြွေးဘို့ထုပ်​​ပေတဲ့ ဘိန်း​တွေကို ကြာလာ​တော့ဆင်​ဦးစီး​တွေကပါ စားပြီး ဆင်​ထိန်းတဲ့သူအ​တော်​များများက ဘိန်းစား​တွေအဖြစ်​များလာခဲ့ပါတယ်​။လူတိုင်း​တော့မဆိုလိုပါ တချို့သစ်​ထုပ်​ဖို့​တောထဲ​တောင်​ထဲမှာဆင်​နှင့်​လချီကြာ​အောင်​​နေ၊သစ်​​တွေထုပ်ပြီးသစ်​ဆွဲ​နေရသဖြင့်​ အ​နေကြာလာ​တော့ဘိန်းစားဖြစ်​သွားရတာမဆန်းပါဘူး။
​နောက်​ ​တောတွင်းလက်​နက်​ကိုင်​​တွေလည်း အများအားဖြင့်​ငယ်​သား​တွေဟာ ဘိန်းနဲ့မကင်းကြပါဘူး။ ဘိန်းကိုစွဲသွားတဲ့အခါထွက်​​ပြေးတာတို့ ဘာတို့သိပ်​မရှိကြ​တော့သလို သူတို့ခိုင်းတာလုပ်​​ပေးဘို့လဲဝမ်​မ​လေးကြ​တော့ပါဘူး။ ​တောတွင်းလက်​နက်​ကိုင်​​တွေရဲ့ တပ်​သားထိမ်းနည်းတမျိုး​ပေါ့လို့​ပြောကြားရင်း ​နောက်​အပတ်​ဆက်​​ရေးပါအုံးမည်​။
25 days ago by yuzana (58)
htwegyi (57) · 25 days ago
မူးယစ်ဆေး သုံးတတ်ရင်ဆေး မသုံးတတ်ရင်ဘေးပေါ့
yuzana (58) · 24 days ago
ဟုပ်​ပါ့ အာစရီ​ရေ့
sleeplesswhale (39) · 25 days ago
You gota27.32% upvote from @sleeplesswhale courtesy of @yuzana!
asterkame (59) · 25 days ago
ရှိတာ​ပေါ့ဗျာ မူးယစ်​​ဆေးဝါး ဆို​တော့
mahaw (59) · 24 days ago
ဆရာ​ဟော်​ မမြင်​ဖူးဘူးလား အာစိ
uthantzin (55) · 24 days ago
ဘိန်းမဲအတွက် သိသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ကိုယုရေးပေးတဲ့အတွက် ဗဟုသုတအဖြစ်သိရှိခဲ့ရပါသည်။ဒ့ါကြောင့် တောတွင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ တပ်သားထိန်းနည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ
minnowhelper (53) · 25 days ago